Wepamusoro 7 Anoshanda Predictive Analytics maturusi muna 2018 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, Dhata Sayenzi, Kufanotaura Ongororo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Munzvimbo ine makwikwi ezveupfumi uye makwikwi, mabhizinesi haakwanise kuvimba nehunyanzvi hwekuita sarudzo. Ngazvive kuongorora zvakanyanya data, kunzwisisa kuwirirana kana kufunga mapatani, Kufanotaura Ongororo zvirokwazvo inobuda seinochinja mutambo uye zvishandiso zvine hukama nazvo zvinouya sechinhu chikuru kune mabhizinesi sezvo ivo vachimhanyisa kubata iyo yese yekutengesa maitiro. Kwete chete izvi zvishandiso zvinokonzeresa kudzikiswa kwenjodzi asiwo inovandudza hunyanzvi hwekuita uye kukura kwesangano chero ripi zvaro.
Ndeapi Mapuratifomu ekuenda?
Saka pano muchinyorwa chino, tinotaura zvimwe zvemazuva ano Predictive Analytics maturusi akaita ruzha rukuru muna 2018. Zvishandiso zvatinotaura zvinosanganisira mashoma masvomhu nematambudziko uye akareruka zviitiko zvevashandisi.
Ida zvaunoverenga? Wobva watora chidimbu chitsva chemukati kubva kuraibhurari yedu.
SAP Bhizinesi Zvinhu:
Kuva mumwe ane simba Bhizinesi Njere chikuva, SAP Bhizinesi Zvinhu zvinonyatso gadzira kumusoro kwezvedu zvinyorwa. Chishandiso chinovimbisa kupa agile uye ruzivo bhizinesi maitiro ekuita sarudzo. Nekudaro ichipa iro bhizinesi maonero matsva zvachose ekuisa mhinduro dzakasimba uye dzinotyisa.
SAP Bhizinesi Chinhu chinobvumidza mabhizinesi kuti aongorore mavhoriyamu makuru e data uye vawane zvimiro zvinokwanisa kukurudzira zviito munguva chaiyo. Ipuratifomu zvakare inobvumidza vashandisi kufungidzira dhata pane yega-yekuzvishandira hwaro uye nekudaro inopa yakaringana nguva kune vese vashandisi nemasangano kutarisisa mukugadzira yakawanda bhizinesi kukosha.
IBM inopa nyore kushandisa kufungidzira kuongororwa zvigadzirwa uye mhinduro kusangana nezvinodiwa zvemabhizinesi akasiyana. IBM SPSS Modeler uye IBM SPSS Analytics ndiwo makuru maviri software inogonesa vashandisi veese hunyanzvi matanho ekushandisa anofungidzira analytics yekuvandudza mabhizinesi. Ipuratifomu inobatsira sangano kushandura iyo isina basa data kuita fungidziro yekutungamira kutungamira makuru mabhizinesi zvisarudzo uye nekudaro kubatsira mukudzivirira kwekubiridzira uye kuwedzeredza kwekuita.
Iine kugona kwemavara analytics uye geospatial ongororo, zviri nyore kuwedzerwa kuvhura sosi matekinoroji uine sarudzo yekodhi. Iyo chikuva kunyange inoita kuti masangano akwanise kuchinjika nekukasira pakuchinja bhizinesi zvinodiwa pasina kukanganisa pane kuchengetedzeka uye zvakavanzika kana uchishandisa iro gore.
Uyezve Verenga: Nzira Predictive Analytics impact Mabhizinesi
Imwe yemapuratifomu akachinjika asi akapusa ehungwaru bhizinesi mapuratifomu ndeye QlikView. Yakagadzirwa neQlikTech yebhizinesi njere data kudzoreredza zvinobatsira masangano kuburitsa ruzivo rwakakodzera kubva paseti yakapihwa yedata. Iyo yakadudzirwa dhata ipapo inobatsira vashandisi mukugadzira yakatungamirwa analytics kunyorera. Ipuratifomu inoshandisa nzira inotungamirwa nemushandisi kune bhizimusi njere uye iyo interface iri nyore kwazvo kushanda nayo kana ichivaka machati uye ichigadzira tsika dzakagadzirwa dhibhodhi dzichiratidza pamatambudziko ebhizinesi.
QlikView inoonekwa kuti inounza iyo inokurumidza uye inotsvedza kuitisa munguva pfupi yenguva. Kunyangwe BARC 'BI Ongororo 10 yakabvuma QlikView yeayo' Agile BI 'kugona uye ikashandura seiye akanyanya zvibodzwa.
Uyewo Verenga: Qlikview Ongororo: Pros, Cons, uye Kukodzera
Kana iwe uchitsvaga magumo ekupedzisira ekugovera cheni manejimendi sisitimu iyo inobatsira mukufungidzira kwebhizinesi uye kuronga saka Halo inofanira kunge iri yako sarudza. Icho chinonyanya smart chikuva icho chinopa yakavimbika yakasimbiswa dhata yekuchengetedza uko zviitiko zvinogona kumhanyisa uye kudzokororwa nekufamba kwenguva kuti zvifananidzire fungidziro nemhedzisiro.
Inowanikwa zvirinyore yekutambirwa kana gore uye inokwanisika kubva kune chero bhurawuza, Halo yekupa cheni analytics inopfuudza ruzivo yakanangana nemaoko evanoita sarudzo. Nekuzvimiririra-yega yekutengesa cheni manejimendi uye kuronga kwedhata, Halo inogonesa masangano kuwana mukana wemakwikwi uye kubatsira kuwedzera kugutsikana kwevatengi.
Uyewo Verenga: Maindasitiri Makuru anoendesa Predictive Analytics
Kubva paKubatanidzwa Data Science chikuva chekuvandudza, Dataiku inopa kushandura dhigi mbishi kuita fungidziro. Dataiku DSS inogonesa vashandisi kuisa analytics akakodzera maalgorithms kuitira kuti vafumure mapatani uye kufungidzira mafambiro. Zvingave kuunganidza kana kufanotaura, vashandisi vanogona kuwedzera raibhurari zviripo kana kushandisa makodhi etsika muR, Python kana vanogona kusanganisa maraibhurari ekunze kuburikidza nekodhi API's.
Chikamu chakanakisa chepuratifomu ndechekuti inopa chinoonekwa che data padanho rega rekuongorora. Zvakare nekushandiswa kwema80+ akavakirwa-mukati mabasa, zvinobatsira vashandisi kupindirana, kuongorora uye kuchenesa mbichana data fomu.
Chimwe chinokurudzira chinosangana nepuratifomu ndechekuti inokurumidza kwazvo kana zvasvika pakugadzirira nekugadzirisa data. Iine yakareruka spreadsheet interface inomhanya yakabatana nekushandurwa kwemamiriro ezvinhu, inoita kuti ishandise pane yakawanda data kusava nekurwadziwa maitiro zvachose.
Uyewo Verenga: Inotsanangurwa Vs Predictive Vs Prescriptive Analysis
RapidMiner Studio ndeye data sainzi yekushambadzira dhizaini iyo inowana, kurodha uye kuongorora chero mhando yedata kuburitsa manhamba uye chakakosha chidimbu cheruzivo. Ipuratifomu zvakare inoshambidza dhata zvakanyatsoita zvekufungidzira analytics uye pahwaro hwedhata rakaburitswa, rinopa mhando dzinokurumidza. Iyo chikuva inouya neasingaenzaniswi seti yemodelling kugona uye machine learning algorithms ekuchengetedzwa uye kusachengetedzwa kwekudzidza.
RapidMiner Studio zvinoreva zvakare kufungidzira chaiyo modhi yekuita. Iyo inoshandisa modular nzira iyo inodzivirira kudonhedza kwedata uye hapana kufungidzira kwekufungidzira zviitiko zvinoitika.
Uyewo Verenga: Tepamusoro nzira Predictive Analytics inogona kusimudzira iyo Banking Sector
Knime kana Konstanz Inforation Miner ndeye yakavhurika sosi chikuva che data analytics, kuripota, uye kusangana. Ipuratifomu inoshandisa Apache Hadoop uye Apache Spark uye inosangana nemaraibhurari akati wandei ekudzidza emuchina senge H2O, Keras, Scikit- Dzidza yekupa yakafambira mberi analytics. Knime inoita iko kushandiswa kwenzvimbo dzekuzvarwa, mipiro yenharaunda, uye akasiyana maturu ekubatanidza uye nekudaro inobuda seyakasimba uye ine simba analytics chishandiso che data data.
Zvakare, chikuva chine nyore kudzidza chinongedzo zvinoreva kuti kukodha kunova sarudzo uye basa racho rakanyorwa nemaziso. Kunze kweiyo akareruka mameseji mafaera, dhatabhesi, mifananidzo, uye kunyangwe Hadoop yakavakirwa data inogona kusanganiswa neiyo imwecheteyo kuyerera kuyerera.
Unoda chishandiso paPredictive Analytics? Ipapo taura nesu kwekutaurirana.